Mpanamboatra ambongadiny Macroporous Adsorptive mpamokatra sy mpamatsy | Dongli
Resina fifanakalozana asidra mahery
Resina fifanakalozana asidra malemy
Resy fifanakalozana base anion mahery
Resin ny fifanakalozana anion base base
Resina fandriana mifangaro
Résin adsorbent Macroporous
Resin'ny Adsorptive Macroporous
Ny resin'i Dongli's adsorbent dia vakana boribory synthetic miaraka amin'ny firafitry ny mason-koditra, ny simia polymer ary ny faritra avo ampiasaina amin'ny fanadiovana sy ny fitrandrahana ireo molekiola kendrena ao anaty vahaolana aqueous.
Resin'ny Adsorption Marcrooporous
Resins Rafitra Matrix Polymer Fisehoana endrika ara-batana Toerana ambonin'ny nFaritra m2/ g Diameter Pore antonony Adsorption Capacity Votoatin'ny hamandoana Haben'ny potika MG Lanjana fandefasana g / L
AB-8 Macroporous Ploy-styrene miaraka amin'ny DVB Vakana boribory fotsy mangirana 450-550 103 nm 60-70% 0.3-1.2 650-700
D101 Macroporous Poly-Styrene miaraka amin'ny DVB Vakana boribory fotsy mangirana 600-700 10 nm 53-63% 0.3-1.2 670-690
D152 Macroporous Pype Poly-acrylic miaraka amin'ny DVB Vakana boribory fotsy mangirana Na / H 1.4 meq.ml 60-70% 0.3-1.2 680-700
H103 Alefaso styrene Crosslink amin'ny DVB Volontany mainty mankany amin'ny Spherical mainty 1000-1100 0,5-1.0TOC / g100mg / ml 50-60% 0.3-1.2 670-690
Ny resrop adsorption macroporous dia karazana resina adsorption polymer tsy misy vondrona fifanakalozana sy rafitra macroporous. Izy io dia manana firafitry ny tambajotra macroporous tsara sy faritra velarana manokana. Azony atao ny mamoaka volo ny zavatra biolojika amin'ny vahaolana aqueous amin'ny alàlan'ny adsorption ara-batana. Izy io dia karazana adsorbika polymer organika vaovao novolavolaina tamin'ny taona 1960. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, sakafo, fanafody ary sehatra hafa.
Ny resina adsorption makroporous amin'ny ankapobeny dia sombina boribory fotsy misy habe amin'ny 20-60 harato. Ny macrospheres an'ny macroporous adsorption resin dia misy fika mikraoba maro misy lavaka ao aminy.
Ny resina adsorption makroporous dia nopolorina tamin'ny styrene, divinylbenzene, sns. Styrene dia nampiasaina ho monomer, divinylbenzene ho toy ny crosslinking agents, toluene ary xylene ho porogens. Izy ireo dia nampifandray sy nopolitika mba hamolavolana ny firafitra firafitra rafitry ny adsorption macroporous.
Ny fisafidianana ny adsorption sy ny desorption dia misy fiatraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny fizotran'ny adsorption amin'ny resina adsorption macroporous, noho izany dia tokony hodinihina ireo lafin-javatra samihafa amin'ny fizotrany manontolo hamaritana ny tsara indrindra momba ny adsorption sy desorption. Betsaka ny anton-javatra misy fiantraikany amin'ny adsorption resin, toy ny fananan'ny singa misaraka (polarity sy ny haben'ny molekiola), ny fananana ny fanalefahana ny solvent (ny solubility ny solvent ho an'ny singa, ny fifantohana sira ary ny sandan'ny pH), ny fifantohan'ny vahaolana amin'ny famoahana sy ny fikorianan'ny rano adsorption taha
Amin'ny ankapobeny, ny molekiola polar lehibe kokoa dia azo sarahina amin'ny resina polar antonony, ary ny molekiola polar kely kokoa dia azo sarahina amin'ny résin non-polar; Arakaraka ny haben'ny habetsaky ny fitambarana no mampitombo ny haben'ny vongan-damosina; Ny fahaizan'ny adsorption an'ny résin dia azo ampitomboina amin'ny alàlan'ny fampidirana sira tsy organika mifanaraka amin'ny vahaolana famoahana; Ny fitambarana asidra dia mora alefa amin'ny vahaolana asidra, ny votoatin'ny fotony dia mora alefa amin'ny vahaolana alkaly, ary ny fitambarana tsy miandany dia mora alefa amin'ny vahaolana tsy miandany; Amin'ny ankapobeny, ny ambany ny fifantohan'ny vahaolana famoahana, ny tsara kokoa ny adsorption; Ho an'ny safidin'ny taham-pandatsahana dia tsara kokoa ny manome antoka fa ny resin dia afaka mifandray tanteraka amin'ny vahaolana fampidinana ho an'ny adsorption. Ny anton-javatra misy fiatraikany amin'ny toe-pahalalana dia misy ny karazana eluent, concentration, pH value, flow rate, sns. Ny eluent dia mety ho methanol, etanol, acetone, etil acetate, sns. fahafahan'ny zavatra samihafa amin'ny resina; Amin'ny fanovana ny sandan'ny pH an'ny eluent dia azo ovaina ny endrika molekiola ao amin'ny adsorbent ary mora esorina izy io; Ny tahan'ny fikorianan'ny elution dia matetika voafehy amin'ny 0,5-5ml / min.
Ny haben'ny mason-koditra sy ny velarantany manokana an'ny resina adsorption macroporous dia somary lehibe. Izy io dia manana rafitra pore telo-dimensional telo ao anaty resin, izay manana tombony maro toy ny fahamarinan-toerana ara-batana sy simika, faritra amboniny lehibe, fahaiza-manao adsorption lehibe, selectivity tsara, hafainganam-pandehan'ny adsorption haingana, toe-javatra malemy paika, fanavaozana mety, lava tsingerin'ny serivisy, mety amin'ny tsingerin'ny boribory mihidy ary mitsitsy vola.
Teo aloha: Vakana volo inert sy Polymer
Manaraka: MA-202U (Resin-takelaka fifanakalozana Anion mahery)
MA-407 Arsenic Selectivity Resin
Làlana Yangzhuang, Distrikan'ny Fampandrosoana Toekarena Guzhen, Bengbu, Anhui, Sina
Manontany ny vidiny
Raha misy fanadihadiana momba ny vokatra, vidiny, aza misalasala mifandray aminay, hiverina afaka minitra vitsivitsy izahay.